यसपालि यस्तो पहिरनमा सजिए बेहुलाहरू, कसरी आयो यो ट्रेन्ड? :: Setopati
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, मंसिर २८
अभिनेत्री श्वेता खड्काको बिहेमा ब्रोकेडको लुगामा सजिएका बेहुला विजयेन्द्र। तस्बिरः क-का-की प्रोडक्सन
कुनै समय थियो, बिहेमा धेरैजसो बेहुला सुटमा ठाँटिन्थे। कोट-प्यान्ट र टाइले नेपाली बेहुलाहरूलाई धेरै वर्ष चिरिच्याट्ट पार्‍यो। अनि चलन आयो ढाका दौरा-सुरूवालमा सजिने। ढाकाकै टोपी, ढाकाकै चप्पल। दौरा-सुरुवालमाथि कम्मरमा कसैले सेतो त कसैले मखमली पटुका बेर्ने।
नेपालीपन देखिने ढाकाको यो पहिरन हराइसकेको त छैन, तर बिस्तारै यसलाई अर्को डिजाइनले उछिन्दै गरेको देखिँदैछ।
यो वर्ष मंसिरपछि लगन छैन। त्यसैले धेरैले यही महिनामा विवाह गरे। आफ्ना साथीभाइको बिहेमा याद गर्नु भयो कि भएन, बेहुलाको लुगामा नयाँ ट्रेन्ड?
प्रायः बेहुलाहरू सेतो वा घ्यू रङको दौरा सुरूवालमा देखिए। अलि धमिला बुट्टा भएका ब्रोकेड कपडाको कुनै कुनै डिजाइनमा दौरामा भेलभेटको रातो किनार पनि हुन्छ। त्यो भेलभेटमा सुनौला जरीका बुट्टा पनि।
यो लुगाको सेटमा सल र टोपी पनि हुन्छ- रातो भेलभेटको वा ब्रोकेडकै। कतिपय बेहुलाले जुत्ता समेत भेलभेट वा ब्रोकेडकै लगाए।
सामाजिक सञ्जाल वा साथीभाइको बिहेमा देखेको यो पहिरनको बजार पनि साँच्चै बढेको हो कि होइन भन्नेबारे हामीले केही कपडा व्यवसायीसँग सोधेका छौं।
सुनसरीको इटहरीमा मंसिर ४ गते भएको विवाहका एक जोडी
बांगेमुढास्थित राष्ट्रिय दौरा सुरुवाल टेलर्सका सञ्चालक दिनेश शाक्यले यसको पुष्टि गरे।
'अहिले ब्रोकेड र भेलभेट दौरा सुरुवालकै अर्डर बढी लियौं,' दिनेशले भने, 'ग्राहकहरू आफैंले डिजाइन दिनुहुन्छ। धेरैले भारतीय संस्कृतिबाट प्रभावित लुगा डिजाइन बनाउन खोज्नुहुन्छ।'
दिनेश राष्ट्रिय दौरा सुरुवाल टेलर्स सम्हाल्ने चौथो पुस्ता हुन्। यसअघि व्यवसाय उनका बुवा हिराबहादुर शाक्यले सम्हाल्थे।
'कसैले सल्लाह माग्दा त हामी ढाकाकै कपडा सिलाउन भन्छौं। तर ग्राहकको रोजाइमा ढाका पर्न छाड्यो क्यार। एकै खालको कपडाभन्दा ट्रेन्डमा भएको कपडा लगाऔं भन्ने हुन्छ होला। एकचोटि गर्ने विवाहमा अरूभन्दा भिन्नै देखिऊँ भन्ने पनि लाग्दो हो। यसपालिको चलन ब्रोकेडको छ,' दिनेशले ठट्यौली पारामा भने।
ढाकाको तुलनामा ब्रोकेडको कपडा सिलाउन महँगो पर्छ। ढाकाको बेहुला कपडा सेट ३ देखि ५ हजार रूपैयाँसम्म तयार हुन्छ। तर ब्रोकेडको सिलाउँदा १० देखि १५ हजारसम्म लाग्ने दिनेश बताउँछन्। ब्रोकेड कपडा ढाकाको तुलनामा नाजुक हुने भएकाले सिलाइमा धेरै मिहिनेत पनि लाग्छ।
यसपालिका बेहुलाहरूले लुगा सेटसँगै भेलभेट वा ब्रोकेडकै सल पनि हातमा सजाएको देखियो। यो नेपाली चलन भने होइन। भारतीय चलनअनुसार सेरवानीमा ओढिने सल शरीर पछाडिबाट हातमा बेरेर लगाइने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
तस्बिर सौजन्यः सानो दौरा सुरुवाल/नमूना दौरा सुरुवाल
तीन वर्षअघि भारतीय ‍क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली र बलिउड अभिनेत्री अनुष्का शर्माले बिहेमा यस्तैखाले ब्रोकेडका कपडा लगाएका थिए। विराटले लगाएको ब्रोकेडको सेरवानी फेसन पारखीहरूले निकै रूचाएका थिए।हामीकहाँ पनि पछिल्ला एकाध वर्षमा ब्रोकेड रूचाइनु त्यहीँबाट प्रभावित हुनसक्ने डिजाइनर तरूनिका महतो बताउँछिन्।
तरूनिकाका अनुसार फेसन र ट्रेन्डमा नाम चलेका कलाकारको मुख्य भूमिका हुन्छ। ठूला अभिनेता/अभिनेत्रीले लगाएको डिजाइनबाट प्रभावित दर्शकहरू आफ्ना लागि त्यस्तै कपडा सिलाउन हौसिन्छन्।
'नेपाली बजारमा त झन् सबभन्दा बढी प्रभाव भारतकै पर्छ। त्यहाँ कलाकारले लगाएको डिजाइनको लुगा यहाँ रुचाउनु हुन्छ,' तरुनिका आफ्नो वर्षौंको फेसन डिजाइनिङ अनुभवमा भन्छिन्, 'सायद यसपालि धेरैजसो विराट कोहलीकै विवाहको कपडाबाट प्रभावित हुनुभयो।'
विराट र अनुष्काको बिहेका फोटा त्यसबेला निकै चर्चाको विषय समेत बनेका थिए।
यसपछि नेपालकै एक चर्चित बिहेमा पनि बेहुलाले यस्तै लुगा लगाएको देखियो- अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीको बिहेमा। पोहोर साल उनीहरूले नेपालीसँगै भारतीय संस्कृति पनि अपनाउँदै बिहे गरेका थिए। प्रियंकाकी आमा भारतीय संस्कारबाट प्रभावित भएकाले पनि उनीहरूका लागि यो स्वाभाविक थियो। बिहेमा आयुष्मानले ब्रोकेडको सेट लगाएका थिए।
अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको बिहेमा ब्रोकेड लुगामा सजिएका बेहुला आयुष्मा। तस्बिरः आयुष्मानको इन्स्टाग्राम
यसबाट पनि नेपाली बेहुलाहरू प्रभावित भए कि!
ब्रोकेड कपडा उज्यालो, चहकिलो र आकर्षक देखिने भएकाले पनि धेरैको रोजाइमा परेको हुनसक्ने तरुनिका बताउँछिन्। रातो र सेतो-घ्यू रङको 'कम्बिनेसन' आकर्षक नै हुन्छ!
'ब्रोकेड र भेलभेट मुलायम र हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। बेहुलीले रातो रङ लगाउँदा बेहुलाले हल्ला क्रिमी, सेतो, पहेँलो लगाउँदा बढी आकर्षक पनि देखिन्छ,' तरुनिकाले भनिन्, 'यसरी हल्का रङको कपडा लगाउने चलन पनि बलिउडबाटै प्रभावित होला।'
तर जति नै नयाँ डिजाइन र कपडा आए पनि ढाकाको कपडा नहराउने श्रेष्ठ टेलरिङका विक्रेता सुरेश श्रेष्ठको भनाइ छ।
'विवाहका लागि प्रायः सुट-प्यान्ट, ढाकाको र जातीय पोशाक सिलाउने पनि हुन्छन्। बजारमा विभिन्न डिजाइन चले पनि ढाकाको व्यापारमा भने खासै फरक पर्दैन,' सुरेशले भने। विक्रेता सुरेश मौलिक र संस्कृति झल्काउने हिसाबमा बिहेका कपडा तयार पार्ने हो भने ढाकाकै सिलाउन सल्लाह पनि दिन्छन्।
अर्कातर्फ नयाँ बानेश्वरस्थित 'नमूना दौरा सुरुवाल' का व्यवसायी विद्या बग्दास भने ट्रेन्ड र बजारअनुसार चल्नु उचित बताउँछिन्।
उनी भन्छिन्, 'सबैको इच्छा फेसन र ट्रेन्डअनुसार बजार चल्ने हो। तुलनात्मक हिसाबमा यसपालि बेहुला सेटका लागि भेलभेट र ब्रोकेडको कपडाको धेरै अर्डर आयो। चलनअनुसारै माग आउने त हो।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७, ०१:४०:००
बिहीबार सुनको मुल्यो तोलामा एक हजारले घट्यो, प्रतितोला ८६, ५०० मा कारोबार
सुनको मुल्य फेरि बढ्यो, तोलाको ८८ हजार ७ सयमा कारोबार
घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, आजको मुल्य ८८ हजार ३००